#OMG ... हराएका सबै बिमान एकै एकै स्थानमा डुबेको पाइयो !! - Taja Report
Homeसमाचार#OMG … हराएका सबै बिमान एकै एकै स्थानमा डुबेको पाइयो !!
#OMG … हराएका सबै बिमान एकै एकै स्थानमा डुबेको पाइयो !!
August 11, 2018 समाचार Comments Off on #OMG … हराएका सबै बिमान एकै एकै स्थानमा डुबेको पाइयो !!
एजेन्सी । मानिस खोज तथा अनुसन्धानको लागि मंगल ग्रहमा पुगिसकेको छ । तर पृथ्वीमै पनि थुप्रै खोज अनुसन्धान गर्न बाँकी कुरा छन्, जो पृथ्वीको गर्भमा रहस्यको रुपमा रहेका छन् । त्यसमा समुन्द्रको त केही प्रतिशत भागमा मात्रै खोज गरिएको छ । त्यसैले समुन्द्रलाई रहस्यको विशाल सम्भावना भएको स्थानको रुपमा लिइन्छ ।
प्रशान्त महासागरको बीचमा बनेको मार्शल टापु कुनै कुनै आश्चर्य भन्दा कम छैन । यसको वरपर रहेका समुन्द्रमा यस्ता रहस्य लुकेका छन्, जुन रहस्य थापा पाउँदा जोकोही पनि आश्चर्य चकित हुनेछ । एक पटक स्कुबा डाईभिङ (समुन्द्रमुनि हिडनु) गरेर प्रसिद्धि कमाएकी ब्राण्डी मुलर (Brandi Mueller) जब फोटो लिनको लागि समुन्द्र मुनी स्कुबा डाईभिङमा गइन्, तब उनलाई यस्तो एउटा रहस्यको पत्ता लग्यो की त्यो जानेर हर कोही आश्चर्यमा पर्ने छ ।
समुन्द्रको निकै गहिराईमा जाँदै गर्दा ब्राण्डीले कुनै जहाजको अवशेष देखिन् । उनले नजिकबाट त्यसको फोटो खिच्ने विचार गरिन् । जब उनी अझै नजिक गइन्, तब त्यहाँ रहस्य अर्कै थियो । वास्तवमा त्यो एक ठूलो लडाकू विमानको अवशेष थियो ।
अनुसन्धानले निकाल्यो यस्तो रहस्य
मुलरले आफ्ना साथीहरुको साथमा ती जहाजको फोटो लिन थालिन् । उनी सो विमानको अन्य अवशेष खोज्दै विस्तारै अघि बढ्दै गइन् । उनले त्यो विमान कसरी दुर्घटनामा प¥यो भनेर जान्न चाहन्थिन् । उनी जसै जसै अघि बढदै गइन् तब उनले एकपछि अर्को विमान देख्न थालिन् । हरेक तिर अमेरिकन एयरफोर्सका ति विमानहरु डुबेका थिए । ति करिव १ सयको संख्यामा थिए । त्यो देखेर उनी डराइन् । उनलाई विश्वास गर्न नै गाह्रो भयो कि आखिर एकै स्थानमा तेत्रो संख्यामा विमानहरु किन दुर्घटना भए ?
कसरी एकै स्थानमा डुबे १०० विमान?
एकै पटक यति धेरै विमान देखेर मुलरलाई यो महशुस भयो की एकै पटक एकै स्थानमा यत्तिका विमान दुर्घटना हुन सक्दैनन् । ति विमानका अवशेषको अवलोकन गर्दा पनि कुनै आक्रमणमा परेको जस्तो देखिएको थिएन । त्यस पछि मुलरले फोटो खिचेर त्यसको सत्यता जान्ने कोशिस गरिन् ।
मुलरले सो फोटो देखाएर आइल्याण्डमा रहेका मानिसहरुसँग जानकारी लिने कोशिस गरिने तर उनीहरुलाई त्यसको बारेमा केही पत्तो थिएन । त्यसपछि उनले अमेरिकी सेनालाई सम्पर्क गरिन् । सेनाबाट उनलाई संक्षिप्त जानकारी मिल्यो । सेनाले ति जहाजहरु दोस्रो विश्व युद्ध ताकाको रहेको बतायो । जापानलाई हराएपछि अमेरिकाले करिव १ सयदेखि १५० को संख्यामा अतिरिक्त विमानलाई डुबाउने निर्णय गरेको थियो । लडाकू विमानको साथसाथै कयौँ कार्गो विमान पनि त्यहाँ डुबाइएको सेनाले बतायो । ति जहाजहरु राख्ने ठाउँको अभावमा यस्तो गरिएको बताइएको छ ।